Inkcazo kunye neMimandla yoMbane wamanzi
Ukushisa nokuTshintshiselwa kwamandla
Amandla okushisa achanekileyo nangokuthiwa ngamandla ashushu okanye ukutshisa. Yindlela yokudluliselwa kwamandla phakathi kweengqungquthela kwizinto (okanye inkqubo) ngokusebenzisa amandla e- kinetic . Ngamanye amagama, ubushushu buhanjiswa ukusuka kwenye indawo ukuya kwelinye ngeengqungquthela eziqhubisanayo.
Ngokulinganisa ngokomzimba, inani lokufudumala elifudlulileyo lidla ngokubonakaliswa ngumqondiso Q.
Ukushisa kunye neHukani
Kubalulekile ukuqonda umahluko phakathi kokushisa nokushisa.
Ukwahlula phakathi kokushisa kunye nokushisa kuyabonakala kodwa kubaluleke kakhulu.
Ukushisa kusetyenziswa ngokubhekiselele ekutshintsheni kwamandla phakathi kweenkqubo (okanye imizimba), kungekhona kumandla equlethwe kwiinkqubo (okanye imizimba).
Ukushisa kubhekiselele kumbane opheleleyo we-molecular motion okanye amandla omzimba wezinto eziphathekayo. Ukushisa, ngakolunye uhlangothi, ngumlinganiselo wesilinganiso okanye umbane obonakalayo wokunyuka kwama-molecular. Ngamanye amazwi, ubushushu bubunamandla, ngelixa ukushisa kunomlinganiselo wamandla. Ukongeza ukushisa kuya kwandisa ubushushu bomzimba xa kususwa ukushisa kuya kunciphisa ubushushu
Unokulinganisa ukushisa kwegumbi ngokubeka i-thermometer egumbini kunye nokulinganisa ukushisa kwe-air. Unako ukongeza ukushisa ekamelweni ngokuguqula indawo yomlilo. Njengoko ubushushu budibaniswa kwigumbi, iqondo lokushisa liphakama.
Kwimilinganiselo ye-thermodynamics, ubushushu bubuninzi bamandla angatshintshwa phakathi kweenkqubo ezimbini. Ngokwahlukileyo, zombini ubushushu kunye namandla angaphakathi yimisebenzi emihle.
Ukushisa kunokulinganiswa (njengeqondo lokushisa), kodwa akusiyo into.
Umzekelo: Insimbi iyatshisa, ngoko kuyacaca ukuba kufuneka kube nokushisa okukhulu kuyo. Ukuqiqa, kodwa kungalunganga. Kulungile ngakumbi ukuthetha ukuba unamandla amaninzi kuwo (okt unezinga eliphezulu lokushisa), kwaye ukuchukumisa kuya kubangela ukuba amandla adlulisele esandleni sakho ...
Iyunithi ye- SI yokushisa yindlela yamandla ebizwa ngokuba yi-playle (J). Ukushisa kuvame ukulinganiswa kwikhalori (cal), echazwa ngokuthi "inani lokushisa okufunekayo ukuphakamisa ubushushu begrama yamanzi ukusuka kwi-14.5 degrees Celsius ukuya kwi-15.5 degrees Celsius ." Ukushisa ngamanye amaxesha kulandelwa "kwiiyunithi zaseBrithani zokuthambisa" okanye iBtu.
Iingqungquthela Zotyikityo zokuTshintshiselwa kwamanzi
Ukutshintshwa kwefuthe kungenziwa kuboniswe ngenani elihle okanye elibi. Ukushisa okukhishwa kwiindawo ezikuzo kubhalwa njengobungakanani obubi (Q <0). Xa ukufudumala kususwe kwiindawo ezungeleleyo, kubhaliwe njengexabiso elihle (Q> 0).
Ixesha elidibeneyo kukufudumala kobushushu, okuyizinga lokutshintshwa kobushushu kwi-unit section section. Ukufudumala kwamanzi kunokuba kunikwe iinqununu zamatts nganye kwiimitha zendawo okanye i-joules kumitha nganye.
Ukushisa kunokulinganiswa njengombuso wesimo okanye njengenkqubo. Umlinganiselo wokushisa ushushu. Ukutshintshwa kwefuthe (inqubo eyenzeka ngexesha elide) linokubalwa ngokusebenzisa amanani okanye kulinganiswa ngokusebenzisa i-calorimetry. Izibalo zokutshintshwa kobushushu zisekelwe kwimimiselo yoMthetho wokuqala we-Thermodynamics.
Ngaba Ikhandlela Ingavutha KwiZero Gravity?
Iimveliso ezenziweyo ezimbini zezinto
Ziziphi Imimiselo Yezinto Ezingabalulekanga?
Isicwangciso seKhemistry Word Problem Strategy
Yintoni eyahlukileyo phakathi kobutyebi nobunzima?
Ukufikelela kwiNyawo elisekunene - iiSiseko zoBume II
IMaya Lin. Umqambi, uMdwebi, noMculi
IiJokes ezigqwesileyo zikaDonald Trump
Amalungu aseNtsapho ngokukhawuleza eMandarin
Imibhiyozo yoNyaka omtsha wamaHindu ngeNgingqi
Ukuguqulela 'Njenge' yeSpanishi
Iindidi zeeNkcubeko zeNkcubeko ziyahluka njani
Yintoni i-Dog Dog Democrat?
Yintoni Inqaku elithi "Imidlalo Engqongqo" Lithetha Kubuchwephesha?
I-American Revolution: I-Battle of Kettle Creek
Ithebula lokuguquguquka lokushisa - iKelvin Celsius Fahrenheit
Ifu ebonakalayo eBhokisini
Ziziphi Iimpawu ZaseNefili zeBhayibhile?
I-Tarantulas i-Bite Bite (kunye nezinye iinkcukacha malunga neentlobo ze-Friendly Spiders)
Iimpawu kunye neZiseko-Ukubala i-pH yeSiseko esiSisiseko